10 महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा चीन > 10 महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न
पढ्ने समय:7मिनेट(Last Updated On: 07/02/2021)
किंवदन्तीहरूको देश, राजवंशहरू, संस्कृतिहरू, र मानिसहरूले ठूलो जादुई चीन निर्माण गर्दैछन्, को घर 10 सबै भन्दा महाकाव्यहरू चीन मा भ्रमण गर्न. सबै ठाउँ उत्साहजनक छ, पुरानो कथाहरू प्रत्येक मोब्बलस्टोनमा भन्दै, पुल, र मूल पानी को 1000 पोखरी.
अर्को 10 सबै भन्दा महाकाव्यहरू चीन मा भ्रमण गर्न, हजारौं बर्षदेखि यता रोचक यात्रीहरू, त्यसैले जीवन भर को यात्रा को लागी तैयार रहनुहोस्.
1. महाकाव्य स्थान चीन मा भ्रमण गर्न: Zhangye डन्क्सिया ल्यान्डफॉर्म
एक आश्चर्यजनक भूवैज्ञानिक घटना, Gansu प्रान्त मा Zhangye Danxia राष्ट्रीय उद्यान को शीर्ष मा छ 10 सबै भन्दा महाकाव्यहरू चीन मा भ्रमण गर्न. मा 2009, "रातो बादल" डान्क्सिया राष्ट्रिय पार्क एक युनेस्को विश्व सम्पदा स्थल भयो.
को पार्क यौगिकहरु 50 वर्ग किलोमिटर, किलियन पर्वत श्रृंखलाको खुट्टामा आराम गर्दै. यो प्राकृतिक आश्चर्य हजारौं बर्ष लाग्यो सौन्दर्य बनाउन जुन दुनिया भर बाट यात्रीहरु लाई आकर्षित गर्दछ. त्यो क्षेत्र जुन कुनै समय सागर थियो, बिस्तारै यसको भूभाग शिखर र ट्रेल्समा रूपान्तरण गरियो, सुन्तलाबाट हरियो, एकदम चित्त बुझेको सुन्दर.
म चीनमा कसरी ड्यान्क्सिया ल्याण्डफार्ममा जान्छु?
तपाईं एक घण्टामा लन्झाउबाट झाhang्गये उडान गर्न सक्नुहुन्छ, वा लिनुहोस् इको-मित्रवत ट्रेन यात्रा को तरीका. यो मात्र हो6रेल द्वारा घण्टा.
2. महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न: Yuanyang चामल Terraces
यदि तपाईं रोमांच खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि एक महाकाव्य साहसिक तल प्रतिक्षा 3,000 Yuanyang चामल छानामा कदम. तपाईं युनान प्रान्तमा यी आश्चर्यजनक धान टेरेसहरू पाउनुहुनेछ, आइलाओ पहाडमा. मनमोहक हानी व्यक्तिहरूले यो अद्भुत दृश्य सिर्जना गरे 2,500 धेरै अगाडी.
"निपुण शिल्पकार" शिल्पितaयूनेस्को विश्व विरासत तिनीहरूको ना bare्गो हातमा साइट, भन्दा बढी मा लाल नदी संग 113 वर्ग किलोमिटर. नोभेम्बर एउटा उत्तम समय हो जुन चीनमा भ्रमण गर्नका लागि दोस्रो सबैभन्दा महाकाव्य स्थानहरू छन्.
म कसरी युयानाang्ग टेरेसहरूमा पुग्छु?
पहिलो, तपाईं कुनमिंग शहर मा पुग्नु पर्छ, र त्यसपछि युयानांग जाने बसमा. Jianshui को लागी एक बुलेट ट्रेन यात्रा को लागी सबैभन्दा सहज तरीका हो, र त्यसपछि युयानान्गमा बस लिनुहोस्.
3. महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न: किhai्घाई ताल
चीनको सब भन्दा अग्लो ताल, किing्घाई ताल चीनमा अवलोकन गर्नका लागि तेस्रो स्थान हो. यदि तपाइँ यस लुकाउन तालमा यात्रा गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईले त्यो लेक कोको नोरलाई थाहा पाउनुपर्दछ, तिब्बती पठारको पूर्वोत्तरमा छ. त्यसैले, तिब्बती र तिब्बती भिक्षुहरूले यसलाई पवित्र ठान्छन्.
यस तथ्यको अतिरिक्त, परिवर्तन हुने मौसमी परिदृश्य, किhai्घाई ताललाई असाधारण बनाउनुहोस् र चीनमा कुनै अन्य ठाउँहरू जस्तो छैन. तपाईं शाब्दिक गर्मीमा किing्घाई ताललाई भेट्न सक्नुहुन्छ, शरद orतु वा वसन्त, र प्रत्येक पटक पूर्ण भिन्न ताल भेट्टाउनुहोस्.
म क्विhaiहाई तालमा कसरी पुग्ने?
पहिले, Xining को लागि ट्रेन ले, र त्यसपछि तपाईं बस लिन वा कि Q्घाई तालमा कार भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ.
4. Zhangjiajie – प्रेसिपिटस स्तम्भहरू
स्तम्भ जस्तै संरचनाहरू, precipitous Zhangjiajie वन पार्क चीन मा एक अचम्म विस्मय जागृत प्रकृति आश्चर्य हो. Zhangjiajie एक प्रकारको बलुआ ढुstone्गा संरचना को एक प्रकारको साइट हो जुन तपाईं दुनिया मा कहिँ पाउन सक्नुहुन्न।. यस महाकाव्य स्थान चीन मा भ्रमण गर्न को लागी अधिक छ 200 चुचुरो, भाला, र पहाडहरू केवल पृथ्वीबाट उगिरहेका छन्.
साथै, यस दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तीन अल्पसंख्यक मानिसहरूलाई भेट्न तपाईं भाग्यशाली हुनुहुनेछ, र लोपोन्मुख प्रजातिहरू जस्तै चिनियाँ पानी हिरन र चिनियाँ विशाल सलामन्डर.
म कसरी Zhangjiajie ढाँचा प्राप्त गर्ने?
यदि तपाईं बेइजि from बाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, संघाई, वा जियान, त्यसपछि Zhangjiajie एक ट्रेन लिनुहोस्.
5. जिउझाइगौ – रंगीन अल्पाइन ताल
आश्चर्यजनक झरनाहरू, पोखरी,9तिब्बती गाउँहरू, र सबैभन्दा बढी रमणीय दृश्य, जिउझाइगु उपत्यका मध्ये एक बनाउनुहोस् 10 महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न. तपाईं मिनु शान पर्वत श्रृंखलामा जिउझाइगु पाउनुहुनेछ, र यो वास्तवमा एक हो राष्ट्रिय निकुञ्ज.
को उचाई मा 2,472 एम. तपाईं पाँच फूल ताल भेट्टाउनुहुनेछ. यो पूर्ण यात्राको लागि अनौंठो र colors्गको लागि लायक हो, ताल-तल्लो traversine चट्टानको परिणाम, र रंगीन शैवाल. यी2तथ्यहरूले आश्चर्यजनक जीव जन्तुले घेरिएको चुचुरो र निलो-पिरोइज पानीको अल्पाइन ताल प्रभाव सिर्जना गर्दछ.
म जिउझाइगौमा कसरी पुग्छु?
तपाईंले चें Che्दू पुग्नु पर्छ, दक्षिण पश्चिम चीन मा सिचुआन प्रान्त को राजधानी बसबाट र उडान.
6. पश्चिमी सिचुआन प्रान्त – डाओचेंग यिडिंग नेचर रिजर्व
यदि तपाइँ चीनको सुन्दर प्रकृतिमा एक पलायन योजना गर्दै हुनुहुन्छ, हिउँ चुचुराहरूको, मूल तालहरू, र पैदल यात्रा स्वर्ग, त्यसोभए याद गर्ने प्रकृति आरक्षित तपाईका लागि उपयुक्त छ. तपाईंले चीनको सिचुआन प्रान्तमा यो महाकाव्य ठाउँ पत्ता लगाउनुहुनेछ, र तपाईं कम से कम समय को लागी राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ 2-3 दिन, यसको सबै चमत्कारहरू पत्ता लगाउन.
"लास्ट शgri्ग्री-ला" तीन चियान्रिजिगको घर हो, जाम्बेयांग, र चान्डोरजे पहाडहरू, त्यो एक त्रिकोण गठन, र जहाँ तपाईं Daocheng मा सबै भन्दा सुन्दर दृश्यहरू पाउनुहुनेछ. यसबाहेक, तपाईं राम्रोको लागि तयार हुन सक्नुहुन्छ 1,000 पोखरी, जसमध्ये एरong्ग “दुध” ताल हो, र अचम्मको पाँच रंग रमा Danzhen ताल 4,600 मीटर.
म कसरी Docheng याद गर्न को लागी?
यदि तपाईं समयमै छोटो हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि यदिंग एयरपोर्ट उडान गर्नुहोस्, र त्यसपछि डाओचेंगमा एयरपोर्ट बस लिनुहोस्. तपाईं बस शान्ग्री-ला गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँबाट यिडिंगका लागि दर्शनीय बस लिनुहोस्. तथापि, यदि तपाईं वास्तवमै चीनमा यो महाकाव्य स्थान पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए राति डाओचेngमा बस्नुहोस्.
7. महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न: फेन्घुवाang, हुनान प्रान्त
फेन्घुवाang हाम्रो परम्परागत स्थानहरू मध्ये एक हो 10 महाकाव्य स्थानहरू चीन सूचीमा भ्रमण गर्न. यस राम्रो संरक्षित शहर मा बनाइएको थियो किंग राजवंश र यसको पुरानो वातावरण र दृश्यहरू अधिकको लागि राख्दछ 300 वर्ष.
त्यसैले, जब तपाईं यस आकर्षक शहरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाई शाब्दिक समयमा पछाडि हिड्दै हुनुहुन्छ. शहरको काठका घरहरू, पुल, मन्दिरहरू समय द्वारा अछुत छन् र दिन वा रात एक अद्भुत वातावरण सिर्जना गर्दछ.
कथाहरूको अनुसार, शहरको नाम "फीनिक्स" भयो2फिनिक्स छोड्न चाहँदैन किनभने यो एकदम सुन्दर थियो, यसैले तिनीहरू यसमा हेर्दै रहे.
Fenghuang कसरी पुग्ने?
त्यहाँ Fenghuang को लागी बस छन्, कुनै रेल छैन. तपाईं हुनन नजिकैको शहरहरूबाट बस लिन सक्नुहुन्छ, चांग्शा जस्तो, र Zhangjiajie.
8. महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न: चीनको महान पर्खाल
चीनको महान पर्खाल विश्वको एक आश्चर्य हो, स्पष्टतः यसले हाम्रो सुविधा दिन्छ 10 सबै भन्दा महाकाव्यहरू चीन मा भ्रमण गर्न.
अधिक को लागि 2,300 वर्षको चीनको ठूलो पर्खाल उत्तरी चीनको परिदृश्यमा हावी छ, र यो चीनको प्रत्येक यात्राको आकर्षण हो. दुर्भाग्यवश, वर्षहरु पछि प्राकृतिक Erosion र मानवीय क्षति को कारण - 2,000 किलोमिटर यस बकाया ल्यान्डमार्क बाट गयो.
तपाईंले नोट गर्नु पर्दछ कि यदि तपाईं सम्पूर्ण भित्तामा हिंड्ने सपना देख्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईं ले हुनेछ 18 महिना कम्तिमा चीनको ग्रेट वालको पैदल पूरा गर्न.
म कसरी चीनको ठूलो पर्खालमा पुग्ने?
तपाईं बेइजि from बाट Bading रेलवे स्टेशन को लागी एक ट्रेन लिन सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि निःशुल्क शटल बसलाई Badaling Great Wall टिकट कार्यालयमा लैजानुहोस्.
9. महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न: कियान्दाओ ताल
भन्दा बढि संग 1000 द्वीप, किआनदाओ ताल संसारमा सबैभन्दा महाकाव्य स्थानहरू मध्ये एक हो, एक्लै चीन छोड्नुहोस्. तपाईं चुनन देश मा यस शानदार ताल भेट्टाउनुहुनेछ, झेजियांग प्रान्त, को क्षेत्र कभर गर्दै 580 वर्ग किलोमिटर.
हजार टापु ताल ताल भित्र निर्मित पछि मानव निर्मित र सिर्जना गरिएको छ 1959. यदि तपाइँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने चीनको कियान्दाओ तालमा यात्रा गर्न, तपाईंसँग एक महाकाव्य समय हुनेछ यसको धेरै ताल र वन पार्क पत्ता लगाउन.
कियान्दाओ तालमा कसरी पुग्ने?
कियान्दाओ तालमा यात्रा गर्ने उत्तम तरिका भनेको हzhou्जाउबाट कियान्डाहु स्टेशन जाने रेल लिएर त्यसपछि ट्याक्सीमा जानुहोस्। कियान्दाओ ताल.
10. महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न: लिजियांग प्राचीन शहर
लिजियांग हाम्रो मा दोस्रो पुरानो शहर हो 10 महाकाव्य स्थानहरू चीन सूचीमा भ्रमण गर्न, र एउटा4चीनमा सबै भन्दा राम्रो संरक्षित पुरानो शहरहरु. लिजियांगको मन्दिरहरू, पुरानो टाइल-छत घरहरूको एक आँगन सहित अद्वितीय Naxi वास्तुकला, धेरै देख्न सक्ने छन्.
जब तपाईं लिजिiangको माध्यमबाट हिड्नुहुन्छ cobbled सडकमा, रातो लालटिन, र पत्ता लगाउनुहोस् 354 पुल, तपाईं Naxi मान्छे को संस्कृति द्वारा छक्क र मोहित हुनेछ, र वास्तुकला.
म फेन्घुवाu पुरानो शहर कसरी पुग्ने?
लिजियांग पुग्न उत्तम तरिका पुरानो शहर लिएर यो हो चिनियाँ ट्रेन Lijiang रेलवे स्टेशन को लागी, त्यसपछि बस वा कार द्वारा.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यी तपाईंको यात्रा योजना गर्न सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 10 अधिकांश महाकाव्य स्थानहरू रेलमा चीनमा भ्रमण गर्न.
डीo तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “10 धेरै एपिक स्थानहरू भ्रमण गर्न चीनमा"तपाइँको साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fepic-places-visit-china%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
BestofChina BestTravelDestferencesChina चिनाबाइट्रिन चिनत्राइन्स चिन्याट्रिप TrainTravelChina ट्राभलचिना भिजिटचिन